ပုရိသတို့ FA ဘဝမှ လွတ်မြောက်အောင် လုပ်နည်း.. -
Posted on March 7, 2019 March 7, 2019 Author Phyu Thant	Comment(0)
RS တွေများလွန်းတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ စကားသွားမပြောရဲလို့ FA ဖြစ်နေရတယ်ဆိုတာက သင့်ကို စမတ်မဖြစ်စေပါဘူးနော်..🙄🙄
FAတွေ အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတာ ယူတို့ သိပါသလား?? FA ထဲမှာ ဖွင့်မပြောရဲလို့ FA ဖြစ်နေတဲ့သူတွေရှိသလို ဖွင့်ပြောလိုက်လို့အငြင်းခံရမှာကြောက်တဲ့ FAတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ FA ဘဝကို ကြိုက်လွန်းလို့ ခံယူထားတဲ့သူတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်နော်… FA ဘွကို ကြိုက်လွန်းလို့ဆိုရင်တော့ အေးဆေးပေါ့နော်.. ဒါမျိုးကျတော့ မင်မင်တို့ဘက်က ပြောပေးနိုင်တာ တစ်ခုပဲ ရှိတယ်.. အဲဒါကတော့ “မင်းရဲ့ ရွေးချယ်မှု” ဆိုတာပါပဲ..
အဲ.. အဲလိုမှ မဟုတ်ဘူး.. ကိုယ်က ကြိုက်နေတဲ့ ကောင်မလေးရှိပြီး မပြောရဲတာဆိုရင်တော့ဖြင့်.. ဒီနည်းလမ်းလေးတွေနဲ့သာ ကြိုးစားကြည့်လိုက်ပါတော့လို့..
(၁) ခွက်ကို စကားပြောရမှာ မကြောက်သင့်ပါ။ 😎
ယူတို့ ကြောက်နေရအောင် ယူတို့ ခွက်က သရဲလား 😛 ကြောက်စရာ မလိုပါဘူးနော်.. ပြောမရဘူးလေ.. သူလည်း ကိုယ့်ကို ကြိတ်ကြွေရင် ကြွေနေမှာပေါ့လို့… ဒီတော့ ရဲရဲသာ ပြောပါ.. အဲ… မြန်မာကားတွေ ဆန်ပြီး လက်ဆွဲ ရည်းစားစကား ပြောရင်တော့ ဘရိုတို့ရဲ့ ပါးမှာ ဟိုက လက်ဝါးတံဆိပ်လေး နှိပ်ပေးပါလိမ့်မယ်လို့ 😜
(၂) အကောင့်မီးစိမ်းတာလေးကို ထိုင်ကြည့်နေခြင်းက အလိုလို အဖြေပြန်မရစေနိုင်ပါဘူး။ 🤨
မီးစိမ်းတာ ထိုင်ကြည့်နေလို့ကတော့ မျက်လုံးပဲ ပျက်သွားမယ်… ယူတို့တွေ FAဘဝက တက်လာမှာ မဟုတ်ဘူးရယ် 😤😤 မီးပွိုင့်မှာတောင် မီးစိမ်းရင် သွားရသေးတာပဲ… အကောင့်မီးစိမ်းရင်လည်း စကားသွားပြောပေါ့.. အဲဒီမှာ ဖြစ်နိုင်ခြေ ၂ ခုထွက်လာနိုင်တယ်။ တစ်ခုက ကောင်းကောင်းမွန်မွန် စကားပြန်ပြောတာ..အဲ့လို ပြန်ပြောတိုင်းလည်း ကိုယ့်ပြန်ကြိုက်နေပြီလားဆိုပြီး မတွေးသင့်ပါနော်… မကောင်းတတ်လို့ လူမှုရေးအရ ပြန်ပြောတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ဖြစ်နိုင်ခြေ တစ်ခုကတော့ ကီးဘုတ်ပျောက်သွားတာပါပဲ :3 အာ့ဆွင်တော့ ကိုယ့်အခြေအနေ ကိုယ်သိပါ ဘဒိုတို့.. 😛
Related Article >>> စင်ဂယ်လ်တိုင်း ရည်းစားလိုချင်တယ်လို့ ဘယ်သူပြောလဲ
(၃) ထမင်းစားပြီးပြီလား၊ နေကောင်းလား? အဲဒီနောက် ဘာမှ ဆက်ဖြစ်မလာတော့ဘူး။ 🤭
ထပ်ခါထပ်ခါဒီစကားပဲပြောမနေနဲ့လေ.. ဒါက ဟိုး လောင်းလောင်းအဂိုးတည်းက ခင်းလာတဲ့ အကွက်တွေ.. အဲဒါတွေ မေးပြီးတော့ ဘာဖြစ်လဲ.. ဘာမှ ဆက်ဖြစ်မလာတော့ဘူး ဆိုတာမျိုးကလည်း ရိုးဟိုးဟိုးနေပါပြီနော်.. အဲ့တော့ သူစိတ်ဝင်စားတဲ့ အကြောင်းလေးတွေ ရှာပြီး သွားသွားပြောပါ။ သူ စိတ်ဝင်စားတဲ့ အကြောင်းက သူ့wall ပေါ် ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ အစားစိတ်ဝင်စားတဲ့သူဆို မုန့်တွေအကြောင်းပြော၊ အမယ်.. အခါအခွင့်သင့်ရင် အပြင်မှာ မုန့်စားရအောင်ဆိုပြီး ဒိတ်လို့တောင် ရနိုင်သေး.. အဟေး… ရုပ်ရှင်ကြိုက်တဲ့သူဆိုလည်း ရုပ်ရှင် အကြောင်းလေးပြောပေါ့…
(၄) သူရဲ့ အကြိုက်တွေကို သိအောင် ကြိုးစားပါ။
စောစောက ပြောသလိုပေါ့… Wall ပေါ်မှာ သွားကြည့်ပြီး ခန့်မှန်းလို့ ရသလို စကားပြောကြည့်ရင်းနဲ့လည်း ခန့်မှန်းလို့ ရပါတယ်။ သူက ခွေးကြောက်တာကို ခွေးလေးတွေက အရမ်းချစ်စရာကောင်းတာ၊ ကျွန်တော်ဆို အိမ်မှာ ၄ကောင်တောင် မွေးထားတာဆိုရင်တော့ ဂွမ်းပါပြီ ဘရိုတို့ရေ…ဆိုတော့ သေချာလေးတော့ လေ့လာဖို့ လိုတာပေါ့နော်…
(၅) သူ တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ဘဲ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပါ ရင်းနှီးအောင်နေပါ။
သူ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ရင်းနှီးအောင်နေပါ။ လိုအပ်ရင် ကိုယ့်ကောင်တွေ ထိုးကျွေးပါ 😛 စတာဘာ.. နောက်တာဘာ.. အတည်ဘာ… သူ့သူငယ်ချင်းတွေက ကိုယ့်ဘက်သားတွေ ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် ဘရိုတို့ FA ဘဝက ကျွတ်ဖို့ ရာနှုန်းနည်းနည်း များသွားပါပြီနော်…
Related Article >>> RS တွေ အားကျသွားမယ့် စင်ဂယ်လ်တို့ရဲ့ တနင်္ဂနွေ
အားအားရှိတိုင်း အိုဗာတွေ တင်းပြီး ဂရုစိုက်ခိုင်းနေတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူးနော်… ဥပမာ မုန့်သွားစားတဲ့ခါကျရင် ဆိုင်ထိုင်လိုက်တာနဲ့ သူကြိုက်တတ်တဲ့ စားစရာလေးတွေ အလိုက်တသိ မှာပေးတာမျိုး၊ နံနံပင်မကြိုက်တဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ မုန့်ဟင်းခါး စားတဲ့အခါ နံနံပင်ဖယ်ပေးဖို့ ကိုယ်က ဦးအောင် မှာလိုက်တာမျိုးပေါ့နော်.. ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ပေမဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အပြုအမူတွေထဲမှာ သူ့ကို ချစ်ကြောင်း ပေါ်လွင်နေတော့ ဒါမျိုး မကြိုက်တဲ့သူ ဘယ်သူရှိလဲ ပြောကြည့်.. 😛
ကဲ..ကဲ… ဒီနည်းလမ်းလေးတွေကို လိုက်လုပ်ပြီး ကိုယ့်ခွက်တွေနဲ့ အဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေလို့…
RS တှမြေားလှနျးတဲ့ ခတျေကွီးထဲမှာ စကားသှားမပွောရဲလို့ FA ဖွဈနရေတယျဆိုတာက သငျ့ကို စမတျမဖွဈစပေါဘူးနျော..
FAတှအေမြိုးမြိုးရှိတယျဆိုတာရောသိပါသလား?? FA ထဲမှာ ဖှငျ့မပွောရဲလို့ FA ဖွဈနတေဲ့သူတှရှေိသလို ဖှငျ့ပွောလိုကျလို့အငွငျးခံရမှာကွောကျတဲ့ FAတှလေညျး ရှိပါတယျ။ ပွီးတော့ FA ဘဝကို ကွိုကျလှနျးလို့ ခံယူထားတဲ့သူတှလေညျး ရှိပါသေးတယျနျော… FA ဘှကို ကွိုကျလှနျးလို့ဆိုရငျတော့ အေးဆေးပေါ့နျော.. ဒါမြိုးကတြော့ မငျမငျတို့ဘကျက ပွောပေးနိုငျတာ တဈခုပဲ ရှိတယျ.. အဲဒါကတော့ ဝိုငျးစုခိုငျသိနျးလို “မငျးရဲ့ရှေးခယျြမှု”ပါပဲ… အဲ.. အဲလိုမှ မဟုတျဘူး.. ကိုယျက ကွိုကျနတေဲ့ ကောငျမလေးရှိပွီး မပွောရဲတာဆိုရငျတော့ဖွငျ့.. ဒီနညျးလမျးလေးတှနေဲ့သာ ကွိုးစားကွညျ့လိုကျပါတော့လို့..
(၁) ခှကျကို စကားပွောရမှာ မကွောကျသငျ့ပါ။
ယူတို့ ကွောကျနရေအောငျ ယူတို့ ခှကျက သရဲလား 😛 ကွောကျစရာ မလိုပါဘူးနျော.. ပွောမရဘူးလေ.. သူလညျး ကိုယျ့ကို ကွိတျကွှရေငျ ကွှနေမှောပေါ့လို့… ဒီတော့ ရဲရဲသာ ပွောပါ.. အဲ… မွနျမာကားတှေ ဆနျပွီး လကျဆှဲ ရညျးစားစကား ပွောရငျတော့ ဘရိုတို့ရဲ့ ပါးမှာ ဟိုက လကျဝါးတံဆိပျလေး နှိပျပေးပါလိမျ့မယျလို့
(၂) အကောငျ့မီးစိမျးတာလေးကို ထိုငျကွညျ့နခွေငျးက အလိုလို အဖွပွေနျမရစနေိုငျပါဘူး။ မီးစိမျးတာ ထိုငျကွညျ့နလေို့ကတော့ မကျြလုံးပဲ ပကျြသှားမယျ… ယူတို့တှေ FAဘဝက တကျလာမှာ မဟုတျဘူးရယျ မီးပှိုငျ့မှာတောငျ မီးစိမျးရငျ သှားရသေးတာပဲ… အကောငျ့မီးစိမျးရငျလညျး စကားသှားပွောပေါ့.. အဲဒီမှာ ဖွဈနိုငျခွေ ၂ ခုထှကျလာနိုငျတယျ။ တဈခုက ကောငျးကောငျးမှနျမှနျ စကားပွနျပွောတာ..အဲ့လို ပွနျပွောတိုငျးလညျး ကိုယျ့ပွနျကွိုကျနပွေီလားဆိုပွီး မတှေးသငျ့ပါနျော… မကောငျးတတျလို့ လူမှုရေးအရ ပွနျပွောတာမြိုးလညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ နောကျထပျ ဖွဈနိုငျခွေ တဈခုကတော့ ကီးဘုတျပြောကျသှားတာပါပဲ :3 အာ့ဆှငျတော့ ကိုယျ့အခွအေနေ ကိုယျသိပါ ဘဒိုတို့.. 😛
Related Article >>> စငျဂယျလျတိုငျး ရညျးစားလိုခငျြတယျလို့ ဘယျသူပွောလဲ
(၃) ထမငျးစားပွီးပွီလား၊ နကေောငျးလား? အဲဒီနောကျ ဘာမှ ဆကျဖွဈမလာတော့ဘူး။
ထပျခါထပျခါဒီစကားပဲပွောမနနေဲ့လေ.. ဒါက ဟိုး လောငျးလောငျးအဂိုးတညျးက ခငျးလာတဲ့ အကှကျတှေ.. အဲဒါတှေ မေးပွီးတော့ ဘာဖွဈလဲ.. ဘာမှ ဆကျဖွဈမလာတော့ဘူး ဆိုတာမြိုးကလညျး ရိုးဟိုးဟိုးနပေါပွီနျော.. အဲ့တော့ သူစိတျဝငျစားတဲ့ အကွောငျးလေးတှေ ရှာပွီး သှားသှားပွောပါ။ သူ စိတျဝငျစားတဲ့ အကွောငျးက သူ့wall ပျေါ ကွညျ့ရငျ သိနိုငျပါတယျ။ အစားစိတျဝငျစားတဲ့သူဆို မုနျ့တှအေကွောငျးပွော၊ အမယျ.. အခါအခှငျ့သငျ့ရငျ အပွငျမှာ မုနျ့စားရအောငျဆိုပွီး ဒိတျလို့တောငျ ရနိုငျသေး.. အဟေး… ရုပျရှငျကွိုကျတဲ့သူဆိုလညျး ရုပျရှငျ အကွောငျးလေးပွောပေါ့…
(၄) သူရဲ့ အကွိုကျတှကေို သိအောငျ ကွိုးစားပါ။
စောစောက ပွောသလိုပေါ့… Wall ပျေါမှာ သှားကွညျ့ပွီး ခနျ့မှနျးလို့ ရသလို စကားပွောကွညျ့ရငျးနဲ့လညျး ခနျ့မှနျးလို့ ရပါတယျ။ သူက ခှေးကွောကျတာကို ခှေးလေးတှကေ အရမျးခဈြစရာကောငျးတာ၊ ကြှနျတျောဆို အိမျမှာ ၄ကောငျတောငျ မှေးထားတာဆိုရငျတော့ ဂှမျးပါပွီ ဘရိုတို့ရေ…ဆိုတော့ သခြောလေးတော့ လလေ့ာဖို့ လိုတာပေါ့နျော…
(၅) သူ တဈယောကျတညျး မဟုတျဘဲ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ပါ ရငျးနှီးအောငျနပေါ။
သူ့ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ရငျးနှီးအောငျနပေါ။ လိုအပျရငျ ကိုယျ့ကောငျတှေ ထိုးကြှေးပါ 😛 စတာဘာ.. နောကျတာဘာ.. အတညျဘာ… သူ့သူငယျခငျြးတှကေ ကိုယျ့ဘကျသားတှေ ဖွဈသှားပွီဆိုရငျ ဘရိုတို့ FA ဘဝက ကြှတျဖို့ ရာနှုနျးနညျးနညျး မြားသှားပါပွီနျော…
Related Article >>> RS တှေ အားကသြှားမယျ့ စငျဂယျလျတို့ရဲ့ တနင်ျဂနှေ
အားအားရှိတိုငျး အိုဗာတှေ တငျးပွီး ဂရုစိုကျခိုငျးနတောမြိုး မဟုတျပါဘူးနျော… ဥပမာ မုနျ့သှားစားတဲ့ခါကရြငျ ဆိုငျထိုငျလိုကျတာနဲ့ သူကွိုကျတတျတဲ့ စားစရာလေးတှေ အလိုကျတသိ မှာပေးတာမြိုး၊ နံနံပငျမကွိုကျတဲ့ ကောငျမလေးနဲ့ မုနျ့ဟငျးခါး စားတဲ့အခါ နံနံပငျဖယျပေးဖို့ ကိုယျက ဦးအောငျ မှာလိုကျတာမြိုးပေါ့နျော.. ဘာရယျတော့ မဟုတျပမေဲ့ ကိုယျ့ရဲ့ အပွုအမူတှထေဲမှာ သူ့ကို ခဈြကွောငျး ပျေါလှငျနတေော့ ဒါမြိုး မကွိုကျတဲ့သူ ဘယျသူရှိလဲ ပွောကွညျ့.. 😛
ကဲ..ကဲ… ဒီနညျးလမျးလေးတှကေို လိုကျလုပျပွီး ကိုယျ့ခှကျတှနေဲ့ အဆငျပွနေိုငျကွပါစလေို့…
Tagged FA, Fun, love, Relationship, Single, tips, Try
ခရပ်ရ်ှရလာပြီဆိုရင် ရာသီခွင်အလိုက် ဘယ်လိုလှုပ်ရှားကြသလဲ။
Posted on December 17, 2017 December 28, 2017 Author Hana
ခရပ်ရ်ှရလာပြီဆိုရင် ရာသီခွင်အလိုက် ဒီလိုတွေ ခရပ်ရ်ှကို ချဉ်းကပ်ကြပါတယ်တဲ့ ယောင်းတို့ရေ.. မှန်များသွားသလား 😛
Posted on January 29, 2018 Author AThae Kyaw
ယောင်းတို့ရေ.. ဒီဝတ္ထုလေး မတင်ဖြစ်တာလည်း ကြာပြီနော်.. လာတောင်းဆိုနေကြတဲ့ ယောင်းတွေလည်း များနေတာမို့ လောလောဆယ် အလွမ်းပြေလေး တင်ဖူးသမျှ အပိုင်း(၄)အထိ စုပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့်.. နောက်တစ်ပတ်ကစပြီး အပိုင်းသစ်တွေ တစ်ပတ်တစ်ပိုင်း လာတော့မှာမို့ တနင်္လာနေ့တိုင်း စောင့်ဖတ်ပေးဖို့ မမေ့ကြပါနဲ့လို့…
အက်ဒမင်တို့တစ်တွေ Money Drop အစီအစဉ်မှာ ဝုန်းခဲ့စဉ်က.
သားသမီးဇောနဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရင်း အောင်မြင်လာခဲ့သူ ဒေါ်သင်းသင်းဆွေနဲ့ ခဏတာ